News Collection: नायिका युना अमेरिकामा के गर्दैछिन् ?
नायिका युना अमेरिकामा के गर्दैछिन् ?
एक कार्यक्रमका लागि भन्दै अमेरिका पुगेकी नायिका युना उप्रेती अहिले अमेरिकामा के गर्दैछिन् होला ? धेरैलाई यो कुरा खुल्दुली लाग्न सक्छ । नायिका उप्रेती अमेरिका गएपछि उनका बारेमा बिभिन्न खबरहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
एकपटक सम्पूर्ण नेपाली सिनेमाका नायिकाहरुलाई नै मुछ्दै उनले दिएको अभिव्यक्तिले सहकर्मी नायिकाहरु रुष्ट समेत बनिरहेका छन् । उनै नायिकाले फेसबुक मार्फत आफूले त्यस्तो कुनै अभिव्यक्ति नदिएको बताएका थिईन् । नायिका उप्रेती अब नेपाल र्फकने या नर्फकने भन्ने बारेमा समेत बिभिन्न चर्चाहरु बजारमा आईरहेका छन् ।
धेरैले नायिका युना उप्रेती नेपाल नर्फकने समेत बताईरहेका छन् । नेपाली कलाकारहरु अमेरिका पुगेपछि उतै पलायन भएका घटनाहरु समेत कुनै नौलो होईन । यो विषयमा नायिका युनाले कुनै आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरेकी छैनन् । तर नायिका युना उप्रेतीले अनलाईन खवरलाई दिएको जानकारी अनुसार उनी अहिले बिभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रममा व्यस्त रहेकी छिन् । उनी अहिले अमेरिकामा कार्यक्रम गर्दै र गर्ने तयारीमा छिन् ।
उनले उनले मार्च महिनाको १२ तारिख र अपि्रल महिनाको १४ तारिखमा अमेरिकाको ट्याक्सिसमा कार्यक्रम गर्ने तयारी भईरहेको बताएकी छिन् । यि दुई कार्यक्रमको तयारीमा लागेकाले पनि आफुले कसैसँग सम्पर्क गर्न नपाएको उनको भनाई छ ।उनले आफूबारेमा सार्वजनिक भएका बिभिन्न भ्रमहरु चिर्न आफू सजग भएको बताउँदै कार्यक्रमका कारणले यसबारेमा खासै बोल्न नपाएको जानकारी गराएकी छिन् ।
यसरी नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै एक कार्यक्रमका लागि भन्दै अमेरीका पुगेकी युना अव नेपाल र्फकन्छिन् या फर्किन्नन् भन्ने कुरा अहिले नेपालमा चर्चाको विषय वनेको छ । आशा गरौं युनाले यसबारेमा छिट्टै मुख खोल्नेछिन् ।